Firimu - Wikipedia
Peji rinoda kuedhitwa ne kuwedzerwa
Seti ye Firimu
Firimu (kubva Chingezi: firimu, ariwo Bhaiskopo kana Mufananidzo unomuvha ) ibasa reuseza hwekuona hunoshandiswa kutevedzera zviitiko zvinofambisa pfungwa, nyaya, maonero, manzwiro, runako, kana mhepo kuburikidza nekushandisa mifananidzo inofamba. Iyi mifananidzo inowanzo kuperekedzwa neruzha, uye kazhinji kashoma, kumwe kukurudzira kwekunzwa. Shoko rekuti " sinema ", rakapfupikiswa kuti cinematography , rinowanzo shandiswa kureva kugadzira mafirimu uye neindasitiri yemafirimu , uye kune chimiro chehunyanzvi icho mhedzisiro yacho.
Iyo inofambisa mifananidzo yefirimu inogadzirwa nekutora mifananidzo chaiyo ine inofamba-pikicha kamera , nekupenda mifananidzo kana madiki madiki uchishandisa echinyakare ehupenyu maficha, kuburikidza neCGI uye komputa mifananidzo , kana nekubatanidzwa kweimwe kana ese eaya matekinoroji, uye zvimwe zvinoonekwa .
Pachivanhu, mafirimu akarekodhwa pama vunyere (celluloid) firimu stock kubudikidza neiyo photochemical maitiro uye ndokuratidzwa kuburikidza neprojekita yemuvhi pane yakakura skrini . Yemazuva ano mafirimu anowanzo kuve akazara madhijitari kuburikidza neese maitiro ekugadzira, kugovera, uye kuratidzira, nepo mafirimu akanyorwa muchimiro chemakemikari zvakagara zvichisanganisira yakafanana analogic ruzha (kurekodha kwakajeka kwemazwi akataurwa, mumhanzi uye mamwe manzwi anofambidzana nemifananidzo inomhanya pamwe nechikamu chemufirimu chakachengeterwa chete, uye hachiratidzwe).
Mafirimu zvigadzirwa zvetsika zvakagadzirwa nedzimwe tsika. Ivo vanoratidzira idzo tsika, uye, zvakare, dzinovabata. Firimu rinoonekwa kuva rinokosha Ndiwe chimiro, tsime varaidzo yakakurumbira, uye simba svikiro kuti rokudzidzisa -kana indoctrinating -vanhu vezhu. Iyo inoonekwa hwaro hwefirimu inoipa iyo yepasirese simba rekutaurirana. Vamwe mafirimu vava mukurumbira munyika zvinokwezva kuburikidza nokushandisa kudhabha (dubbing) kana dumidzazasi (subtitles) kuti ashandurire kuti nhaurirano kupinda mimwe mitauro.
Mifananidzo yega yega inoita firimu inonzi mafuremu. Mune fungidziro pamusoro zvetsika vunyere mafirimu, mumwe kutenderera shatara (shutter) kunokonzera zvikamu murima sezvo pepuranga rimwe nerimwe, akavapindurawo, iri ipedze kuti purojekitwa (projected), asi Fafitera hakurevi cherechedzai zvinovhiringidza pamusana Zvinozivakanwa sezvo kutsungirira nechaanoona, mauri ziso rinochengeta mufananidzo unooneka kwechikamu chidiki chechipiri mushure mekubva kwaro kwarinobva. Iko kufunga kwekufamba kuri pamwe nekuda kwehunhu hwepfungwa hunodaidzwa kuti Fi Fenoni (phi phenon).
Zita "firimu" anobva pakuti Fanagirafiki firimu (anonziwo firimu dzemari) ave nhoroondo makanga svikiro kurekodha uye kuratidza mifananidzo inofamba. Mazhinji mamwe mazwi aripo emumwe munhu anofamba-pikicha, kusanganisira mufananidzo, ratidzo yemufananidzo, mufananidzo unohamba, photoplay, uye furika (flick) . Shoko rinoshandiswa kazhinji kuAmerika imuvhi , nepo muYuropu ifirimu inosarudzwa. Mazwi akajairika emunda muzhinji anosanganisira skirini hombe , skirini re darejena , mabhaisikopo , uye sinema ; yekupedzisira yeiyi inowanzo shandiswa, sezwi rakawandisa, muzvinyorwa zvevadzidzi uye nhaurwa dzakakomba. Mumakore ekutanga, shoko reshiti dzimwe nguva raishandiswa panzvimbo pechidzitiro. 'Firimu' kazhinji harisi izwi rakanaka kureva chirevo chakareba chekutengesa vhidhiyo sezvo ichivhiringidza zvakawandisa uye nekudaro inoda mamiriro ekududzira kwakaringana.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Firimu&oldid=89603"
Last edited on 13 Gunyana 2021, at 07:17
This page was last edited on 13 Gunyana 2021, at 07:17.